Faradoboka teny Antsonjombe: nomen’Antananarivo an-dRajoelina ny fitiavany… lehibe indrindra | NewsMada
Faradoboka teny Antsonjombe: nomen’Antananarivo an-dRajoelina ny fitiavany… lehibe indrindra
Hifarana anio amin’ny misasak’alina ny fampielezan-kevitra. Nanao faradoboka tamin’ny faritra maromaro ny kandidà Rajoelina. Anisan’izany ny teto Antananarivo sy Toliary ary hofaranany any Melaky raha tsy misy ny fiovana.
Niavaka sady nisongadina ny faradoboka nataon’ny kandidà Rajoelina teto Antananarivo, natao teny amin’ny “Coliseum” ny asabotsy teo. Hipoka tanteraka ny kianjasy ny ivelany ary noporofoin’Antananarivo ny fitiavany ny kandidà laharana faha-13. Nambarany tamin’izany fa hisy ny fanorenana tanàna vaovao antsoina hoe « Tanamasoandro ». Vahaolana amin’ny hamaroan’ny mponina eto an-dRenivohitra izany. Ahitana fotodrafitrasa goavana sy mifandraika amin’ny fiainan’ny mponina, toy ny tsena, ny toeram-piasana, ny trano fonenana maoderina sy manara-penitra, ny sekoly… Afindra amin’izany tanàna vaovao izany ny minisitera sy ny biraom-panjakana. Anisan’ny hamaha ny fitohanan’ny fiarakodia eto an-dRenivohitra, hanampy ny toeram-ponenana ary hitarika asa ho an’ny tanora koa.
Nitarika ny propagandy ny Jly Camille Vital
Natsidiny koa ny hanamboarana tetezana mihantona tahaka ny any ivelany ireny, hapetraka amin’ny lalam-pirenena voalohany eny Ampitatafika izany. Nitohy tany Toliary izany, omaly ary tahaka izany koa ny amaroan’ny olona nanara-dia ny kandidà Rajoelina.
Ho an’ny tany Sakaraha kosa, nitarika ny fampielazan-kevitra ho an’ny mpanorina ny IEM ny Praiminisitra teo aloha, ny Jly Camille Vital sy ireo depiote ary ben’ny Tanàna amin’ireo kaominina 12 mandrafitra ity distrika ity. “Hanome 95% ho an’ny kandidà Rajoelina izahay”, hoy ireo vahoaka marobe.